Waraaqaha midabada ugufiican ee Android | Androidsis
Ma jeceshahay sawirro midab leh? Hoos waxaad kaheleysaa xulasho balaaran oo sawiro leh codad layaab leh si aad si buuxda shaqsiyadeed ugulabeyn karto qalabkaaga Android isla markaana aad ugudareyso taabashada midabka gurigaaga ama shaashadda qufulka.
Ku habee taleefankaaga Android naqshadahan midabbada leh iyo kuwa asalka ah ee ka dhigi doona mid gebi ahaanba u gaar ah. Ka dooro asalka aad jeceshahay dhammaan asalka midabada leh ee sawirka.
Hoos waxaad ku leedahay galleel ay ka buuxaan asalka wareega ama kiniin midabkiisu ka buuxo
Ma jeceshahay waraaqaha sawirada leh ee midabada leh? Markaas qaybtaan ayaa adiga loogu talagalay Xul ballaaran oo ka mid ah sawir-gacmeedka midabada badan ee loogu talagalay taleefankaaga casriga ah ee Android ama kiniiniga suuqa ku jira. Ma aha oo kaliya midabada inay door gaar ah ku leeyihiin iyaga dhexdooda, waxaan sidoo kale helnaa qaababka iyo naqshadaha asalka ah. Kuwaas oo dhammaantood leh tayada muuqaalka ugu fiican.